Lubnaan oo doorasho ay ka dhacayso sanado badan kaddib - BBC News Somali
Image caption Doorashada maanta ayaa ah tii ugu horeysay tan iyo 2009
Doorashadii ugu dambeysay ee soo marta Lubnaan ayaa dhacday sanadkii 2009, taasi oo muddadii loogu talagalay ay ahayd afar sano.
Mareykanka oo ka digay faragalin Lubnaan lagu sameeyo
Ra'iisulwasaaraha Lubnaan "iscasilaadda waxaa ku qasbay Sacuudiga"
Balse baarlamaanka ayaa muddo kordhin sameystay laba jeer sababo la xiriira deganaansho la'aanta ka jirta dalka dariska la ah ee Suuriya, iyo in isbadel lagu sameeyo sharciyada doorashada ee waddankaasi.
Waxaa la badelay hanaanka codbixinta, waxaana hoos la yareeyay tirada deegaanada, iyada oo loo ogolaaday markii ugu horeysay inay codeeyaan qurbajoogta dibedda ku nool..
Kooxda hubeysan ee Xisbullaah, oo Mareykanka iyo dalal kale ay u arkaan urur argagixiso ayaa dooneyso inuu kordhisto kuraasta ay ku leeyihiin baarlamaanka.
Doorashada kuraasta baarlamaanka oo gaareysa 128 ayaa soconeysa ilaa 7maqribnimo ee xiliga Lubnaan.
Natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaana la shaacin doonin ilaa Isniinta ama Talaadada, balse dadka ka falanqooda siyaasadda Lubnaan ayaa sheegaya inay rajeynayaan inay helaan najiijada habeenka Axada.
Image caption Waraaqaha codbixinta
Tobanaan kun oo dadka Lubnaan ah oo ku nool dalalka dibedda ayaa codkooda dhiibtay horaantii toddobaadkaan.
Dalka Lubnaan ayaa leh taariikh fog oo ku saleysan hannaanka awood qeybsi ee siyaasadda iyo xilalka ugu sareeyo waddanka.
Tirade kuraasta ee baarlamaanka ayaa loo qeybsadaa Muslimiin iyo Kiristaan, xilalka madaxweynaha, Ra'isal wasaraha iyo gudoomiyaha baarlmaanka ayayna tahay in ay ka kala yimaadaan muslimiinta iyo Kirirstaanka. .
Sacad Xariiri oo Lubnaan ku noqday
Xariiri oo ku laabtay Lubnaan kana laabtay is casilaaddiisii
Ra'isal wasaaraha haatan Sacad Alxariiri, oo kasoo jeedo suniyiinta Lubnaan ayaa sababy bishii November xiisad siyaasadeed, kaddib markii uu socdaal uu ku tagay dalka Sucuudi Carabiya, uu ka shaaciyay telefishinka inuu iscasilay, taasi oo uu sabab uga dhigay inuu ka baqay in la dilo.
Balse Sacad Alxariiri ayaa labo toddobaad kaddib hakiyay iscasilaadiisa, kaddib markii uu la yeeshay madaxweyne Michel Aoun uu wadahadal dib ugu laabanayay Lubnaan.
Dalalka Midowga Yurub ayaa sheegay inay kormeerayaasha doorashada u direen dhammaan deegaanada ay ka dhaceyso doorasahda ee dalka Lubnaan.
Arrimaha waaweyn ee horyaala baarlmaanka cusub ee la dooranayo ayaa waxaa ka mid ah masiirka qaxootiga tirada badan ee soo galay dalkaasi, tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka dilaacay Suuriya, iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira Lubnaan.